भुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम – Online Nepal Site
भारतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा रामदेवसंग तस्बिर भाईरल, बाबा रामदेव ड्राइभर बनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए सेवा
अष्ट्रेलियामा नेपाली नेपालिबिच यस्तो डरलाग्दो कु`टाकुट (हेर्नुस् भिडियो )
अनुहारको डन्डिफोर, दाग वा पोतो देखी तन्दुरुस्त हून मुलाको प्रयेाग यसरी गर्नूहोस
बिहेको लागी केटा खोज्दै मनोज गजुरेलकि पुर्वपत्नी मिना ढकाल : भन्छिन मलाई जुन जातको केटा भएनी हुन्छ
नायिका गरिमा पन्त आमा बन्दै
धन कमाउन गएका चितवनका सुर्य गुरुङ हृ’दयाघा’तका कारण पोर्चुगलमै अस्ताए अधुरै रहृयो नेपाल आउने सपना
काठमाण्डौमा एक करोडपतिकी पत्नी यस्तो पेशामा! भन्छिन्, ‘पतिले मलाई सुख दिन सकेनन्, त्यसैले…
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम
भुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा सबै वारहरुमा कुनै न कुनै भगवानको विशेष आराधना गरिन्छ । हरेक वारको महत्व हुन्छ । आज आज मंगलबार भगवान गणेशको मुख्य दिन हो । मंगलवार हनुमानको पनि आराधना गरिन्छ । मंगलवार भगवान गणेशका दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ।
बक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा ।
निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्व – कार्येशु सर्वदा ।।
करोडौं सूर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेश देवलाई आराधना गर्नाले बिघ्न बाधा र अधुरा काम पूरा हुने विश्वास छ । हिन्दु धर्म शास्त्रमा जुनसुकै भगवानको पुजा गर्दा सबैभन्दा पहिला गणेशको आराधना गरिन्छ । गणेशको आराधना नगरी गरिएको पुजाको फल प्राप्त नहुने धार्मीक मान्यता छ । त्यसैले गणेश भगवान सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुन् ।
शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न केही काम गर्न बर्जित पनि गरिएको हुन्छ । सोमबार, बुधवार र शुक्रवारलाई सोम्यबारको श्रेणीमा राखिएको छ भने आइतबार र बिहीबारलाई कडाबारको श्रेणीमा राखिएको छ ।
मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ । मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ ।
कालपुरुष सिद्दान्त अनुसार प्राणीको हाड र रक्त तथा मज्जा मंगलसँग सम्बन्धित छ । मंगललाई सबै ग्रह मध्ये क्रुर र रक्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृत्यु वा रगत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ ।
मंगलबारको दिन गर्न नहुने ५ काम
१– मंगलबारको दिनमा पशु ब लि दिनु अत्यन्तै खराव मानिन्छ । यसले सन्तानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
२– मंगलबार कुखुरा वा अन्य पंक्षीको ह त्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मानिन्छ ।
३– मंगलबारको दिन माछा खाँदा तपाइँलाई आर्थिक नो क्सानी हुने मानिन्छ ।मंगलबार मासु पनि सेवन गर्नु हुँदैन । मासु खाँदा कुटुम्बको क्ष य हुन्छ ।
४– मंगलबारको दिन म दि रा सेवन गर्दा तपाइँको क्रो धमा वृद्धी हुन्छ । यसले अ प रा ध समेत बढाउँछ ।
सूर्य भगवानको पूजा गर्दा यो मन्त्र जप्नाले हुन्छ फलिफाप
श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने !सलाईको काटीले चुलो मात्र होईन घरपनी जलाउन सक्छ पूरा हेर्नुहोस
६ बर्षीय फुटबलर : रोनाल्डोको जस्तो शरीर, मेस्सीको स्टाईल
यी ३ राशिका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, पहिलो भेटमै पुरुष हुन्छन् फिदा